ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အစားအစာ (၄) မျိုး။ – SoShwe
Home/Health & Beauty/ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အစားအစာ (၄) မျိုး။
So Shwe May 16, 2022	Health & Beauty Leaveacomment
တစ်သက်တာလုံး ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ နေထိုင်သွားချင်ပါသလား? ဒီစိတ်ကူးလေး ပြည့်ဝအောင်မြင်စေဖို့က အရမ်းကြီးတော့ မခက်ခဲပါဘူး။ အဓိက,ကတော့ ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေကို ရှောင်ရှားဖို့ပါပဲ။
ဆေးပညာသုတေသီတွေရဲ့ နောက်ဆုံးတွေ့ရှိတဲ့ အချက်အလက်တွေအရ လူသားတွေနေ့စဉ် အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ စားသောက်နေတဲ့ အစားအစာအချို့ဟာလည်း ရေရှည်မှာ ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်လိုအစားအစာတွေကို ရှောင်ရှားရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်း Soshwe စာဖတ်ပရိသတ်တွေအတွက် ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။
၁။ အသင့်သောက်သုံးလို့ရတဲ့ အသီးဖျော်ရည်များ။
လတ်ဆတ်တဲ့ အသီးအနှံဆိုတာ Vitamin ဓာတ် ကြွယ်ဝပြီး ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အကျိုးပြုတယ်ဆိုပေမယ့် ဒီအသီးတွေကို အသင့်သောက်သုံးနိုင်တဲ့ ဖျော်ရည်တွေအဖြစ် ပြုပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ Vitamin ဓာတ်တွေ ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ အသီးဖျော်ရည်တွေနဲ့ အချိုရည်တွေမှာ သကြားဓာတ်နဲ့ ကြာရှည်ခံနိုင်တဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေလည်း ပါဝင်နေတာကြောင့် ရေရှည်သောက်သုံးတဲ့အခါမှာ ဆီးချိုနဲ့ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ ဖြစ်နိုင်ချေရှိပါတယ်။
Sushi ကတော့ သူ့ချည်းသက်သက်ဆို အန္တရာယ်မရှိပေမယ့် မယောနိစ်၊ ချိစ်၊ ဆော့စ်လို အရာတွေနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ အချို့ဆူရှီတွေကတော့ ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးကျိုးတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအရာတွေကနေရရှိမယ့် များပြားတဲ့ ကယ်လိုရီပမာဏကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို ဆိုးဆိုးရွားရွား တိုးလာစေပြီး ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
သဘာဝအတိုင်းရရှိတဲ့ ငါးတွေမှာ Omega-3 Acid ပါဝင်ပေမယ့် မွေးမြူရေးငါးတွေမှာတော့ အချိန်တိုအတွင်း မြန်မြန်ကြီးထွားလာအောင် အသားတိုးဆေးတွေ ကျွေးမွေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့အရာတွေ ပါဝင်မှုက နည်းပါးပါတယ်။ ဒီငါးတွေလည်း ဆူရှီတွေလိုပဲ ရေရှည်စားသုံးမယ်ဆိုရင် နှလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ရောဂါမျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
အဖြူထည်ပေါင်မုန့်တွေဟာ ပေါင်မုန့်ကြမ်းတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင် ခန္ဓာကိုယ် အာဟာရဖြစ်စေမယ့် ဗီတာမင်နဲ့ အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှုဟာ မရှိသလောက်နည်းပါးလှပါတယ်။ အမျှင်ဓာတ်က ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်မှုကိုလည်း လျှော့ချပေးနိုင်ပြီး နှလုံးနဲ့သွေးကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါတွေကိုလည်း တားဆီး ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဗီတာမင်နဲ့အမျှင်ဓာတ်တွေမပါဝင်တဲ့ အဖြူထည်ပေါင်မုန့်ကို စားသုံးနေမယ်ဆိုရင်တော့ ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ အသက်ရှည်ရှည်လေး နေထိုင်သွားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အစားအစာလေးတွေကို ရှောင်ကြဉ်ပြီး စားသုံးကြဖို့ မမေ့နဲ့နော် ….
က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစနိုင္တဲ့ အစားအစာ (၄) မ်ိဳး။
တစ္သက္တာလုံး က်န္းက်န္းမာမာနဲ႔ ေနထိုင္သြားခ်င္ပါသလား? ဒီစိတ္ကူးေလး ျပည့္ဝေအာင္ျမင္ေစဖို႔က အရမ္းႀကီးေတာ့ မခက္ခဲပါဘူး။ အဓိက,ကေတာ့ က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္ေစနိုင္တဲ့ အစားအစာေတြကို ေရွာင္ရွားဖို႔ပါပဲ။
ေဆးပညာသုေတသီေတြရဲ႕ ေနာက္ဆုံးေတြ႕ရွိတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအရ လူသားေတြေန႔စဥ္ အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ စားေသာက္ေနတဲ့ အစားအစာအခ်ိဳ႕ဟာလည္း ေရရွည္မွာ က်န္းမာေရးကို ဆိုးရြားစြာ ထိခိုက္ေစနိုင္တယ္လို႕ သိရွိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္လိုအစားအစာေတြကို ေရွာင္ရွားရမလဲဆိုတ့ဲအေၾကာင္း Soshwe စာဖတ္ပရိသတ္ေတြအတြက္ ေဝမွ်ေပးခ်င္ပါတယ္။
၁။ အသင့္ေသာက္သုံးလို႕ရတ့ဲ အသီးေဖ်ာ္ရည္မ်ား။
လတ္ဆတ္တဲ့ အသီးအႏွံဆိုတာ Vitamin ဓာတ္ ႂကြယ္ဝၿပီး ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အက်ိဳးျပဳတယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီအသီးေတြကို အသင့္ေသာက္သုံးနိုင္တဲ့ ေဖ်ာ္ရည္ေတြအျဖစ္ ျပဳျပင္လိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ Vitamin ဓာတ္ေတြ ဆုံးရႈံးသြားနိုင္ပါတယ္။ အသီးေဖ်ာ္ရည္ေတြနဲ႔ အခ်ိဳရည္ေတြမွာ သၾကားဓာတ္နဲ႔ ၾကာရွည္ခံနိုင္တဲ့ ဓာတုပစၥည္းေတြလည္း ပါဝင္ေနတာေၾကာင့္ ေရရွည္ေသာက္သုံးတဲ့အခါမွာ ဆီးခ်ိဳနဲ႔ ႏွလုံးေသြးေၾကာက်ဥ္းေရာဂါ ျဖစ္နိုင္ေခ်ရွိပါတယ္။
Sushi ကေတာ့ သူ႕ခ်ည္းသက္သက္ဆို အႏၲရာယ္မရွိေပမယ့္ မေယာနိစ္၊ ခ်ိစ္၊ ေဆာ့စ္လို အရာေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အခ်ိဳ႕ဆူရွီေတြကေတာ့ က်န္းမာေရးအတြက္ ဆိုးက်ိဳးေတြကို ျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအရာေတြကေနရရွိမယ့္ မ်ားျပားတဲ့ ကယ္လိုရီပမာဏေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ဆိုးဆိုးရြားရြား တိုးလာေစၿပီး က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစနိုင္ပါတယ္။
သဘာဝအတိုင္းရရွိတဲ့ ငါးေတြမွာ Omega-3 Acid ပါဝင္ေပမယ့္ ေမြးျမဴေရးငါးေတြမွာေတာ့ အခ်ိန္တိုအတြင္း ျမန္ျမန္ႀကီးထြားလာေအာင္ အသားတိုးေဆးေတြ ေကၽြးေမြးထားတ့ဲအတြက္ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစတဲ့အရာေတြ ပါဝင္မႈက နည္းပါးပါတယ္။ ဒီငါးေတြလည္း ဆူရွီေတြလိုပဲ ေရရွည္စားသုံးမယ္ဆိုရင္ ႏွလုံးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ေရာဂါမ်ိဳးေတြ ျဖစ္လာနိုင္ပါတယ္။
အျဖဴထည္ေပါင္မုန႔္ေတြဟာ ေပါင္မုန႔္ၾကမ္းေတြနဲ႔ ႏွိုင္းယွဥ္မယ္ဆိုရင္ ခႏၶာကိုယ္ အာဟာရျဖစ္ေစမယ့္ ဗီတာမင္နဲ႔ အမၽွင္ဓာတ္ပါဝင္မႈဟာ မရွိသေလာက္နည္းပါးလွပါတယ္။ အမၽွင္ဓာတ္က ေရာဂါျဖစ္ပြားနိုင္မႈကိုလည္း ေလွ်ာ႕ခ်ေပးနိုင္ၿပီး ႏွလုံးနဲ႔ေသြးေၾကာနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ေရာဂါေတြကိုလည္း တားဆီး ကာကြယ္ေပးနိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဗီတာမင္နဲ႔အမၽွင္ဓာတ္ေတြမပါဝင္တဲ့ အျဖဴထည္ေပါင္မုန႔္ကို စားသုံးေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစနိုင္ပါတယ္။
က်န္းက်န္းမာမာနဲ႔ အသက္ရွည္ရွည္ေလး ေနထိုင္သြားခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အစားအစာေလးေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး စားသုံးၾကဖို႔ မေမ့နဲ႔ေနာ္ ….
Tags Omega-3 Acid Unhealthy Food Vitamin
Previous ယူနိုက်တက်ဂန္တဝင်နောက်ခံလူဟောင်း ဖာဒီနန်ရဲ့ အ့ံအားသင့်ဖွယ် ဖွင့်ဟဝန်ခံမှု။
Next San Francisco တစ်မြို့လုံးကို နောက်ပြောင်ခဲ့သည့်အမျိုးသား။
ကျန်းကျန်းမာမာရှိဖို့ဆိုရင် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုရှိဖို့လည်း လိုပါတယ်။ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာ (ဒါမှမဟုတ်) ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာက အဝလွန်တာ၊ နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါတွေ၊ စိတ်ရောဂါ၊ ဆီးချိုရောဂါလို ရောဂါများစွာကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ စက်ဘီးစီးတာက သင့်ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကို …